Nosokafan'i Thailand indray i Phuket hanao vaksiny mpizahatany vahiny amin'ny 1 Jolay
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Nosokafan'i Thailand indray i Phuket hanao vaksiny mpizahatany vahiny amin'ny 1 Jolay
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Governoran'ny TAT Yuthasak Supasorn
Ny hotely sy ny toerana fizahan-tany hafa ao amin'ny faritanin'ny nosy dia voaomana amin'ny fanokafana indray ary hatramin'ny 80 isan-jaton'ny mponin'i Phuket no nanao vaksiny fanoherana ny COVID-19 hatramin'ny alarobia.
Amin'ny alàlan'ny programa Phuket Sandbox dia avela hiditra sy hivezivezy malalaka ao amin'ilay nosy ny mpizahatany vahiny vita vaksiny.
Tombanana mpizahatany vahiny 400 ka hatramin'ny 500 no kasaina ho tonga ao Phuket ny alakamisy izao.
Tonga io hetsika io satria sahirana i Thailandy amin'ny famoahana aretina mandritra ny volana maro.
Ny governoran'ny Fahefan'ny fizahan-tany any Thailand (TAT) nanambara androany fa ny fanjakana dia vonona hanomboka ny fampielezan-kevitr'i Phuket Sandbox amin'ny 1 Jolay ary hanokatra indray ny nosy fampiantranoana hanaovana vaksiny mpizahatany vahiny.
Ny trano fandraisam-bahiny sy toerana hafa mifandraika amin'ny fizahan-tany manerana ny faritanin'ny nosy dia voaomana amin'ny fanokafana indray ary raha ny 80 isan-jaton'ny mponin'i Phuket, ao anatin'izany ireo nokaramaina tao amin'ny indostrian'ny hotely sy fizahan-tany, dia hatao vaksiny manohitra ny COVID-19 amin'ny alarobia, ny governoran'ny TAT Yuthasak. Hoy i Supasorn.
Tombanana ho 400 ka hatramin'ny 500 ny mpizahatany vahiny kasaina ho tonga Phuket amin'ny Alakamisy ary maro hafa no antenaina hanaraka amin'ny fotoana manaraka, hoy izy.
Eo ambanin'ny programa Phuket Sandbox dia avela hiditra sy hivezivezy malalaka eto amin'ny nosy ny mpizahatany vahiny, raha vaksinina tanteraka amin'ny virus sy voaporofo fa ratsy. Afaka mandeha any amin'ny faritra sisa any Thailand izy ireo aorian'ny fijanonana ao amin'ny nosy mandritra ny 14 alina.
Tonga io hetsika io satria sahirana i Thailandy amin'ny famoahana aretina mandritra ny volana maro. Tamin'ny Alatsinainy, nitatitra tranga miisa 5,406 19 COVID-250,000 ny firenena, ny fanisana fahatelo avo indrindra isan'andro hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina, ka nampiakatra ny totalin'ny tranga hatramin'ny XNUMX.